Uhlobo lwe-beta lweFedora 34 selukhishiwe futhi lezi yizindaba zalo | Kusuka kuLinux
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule Ukukhishwa Kwe-Fedora 34 Beta Kuthululiwe (inguqulo yokubuka kuqala yenguqulo elandelayo yeFedora) leyo isebenzisa i-GNOME 40 njengendawo ezenzakalelayo yedeskithophu futhi okukhomba ukuqhwa kwazo zonke izinguquko ezizofakwa enguqulweni ezinzile.
I-GNOME 40 ihlukaniswa ngesikhethi sendawo yokusebenza evundlile ehlose ukuletha ama-ergonomics amakhulu endaweni yokusebenza ngokuya kakhulu kwizindawo zokuxhumana ezivame ukuhlotshaniswa namathebulethi.
Yini Okusha ku-Fedora 34 Beta?
Uhlobo olusha lweFedora isebenzisa ideskithophu entsha ye-GNOME 40, eletha ukuthuthuka kokuhlangenwe nakho komsebenzisi Encazelweni ejwayelekile yomhumushi womyalo we-GNOME, izithuthukisi zayo zihlele kabusha izici ezinjengokusesha, amawindi, izindawo zokusebenza, nezinhlelo zokusebenza ukubenza bahambisane nesikhala. IGNOME 40 kufaka phakathi nentuthuko ekuphatheni iziqaphi eziningi futhi ivumela abasebenzisi ukuthi bakhethe phakathi kwezikhala zokusebenza kuphela ezikrinini zabo ezinkulu noma ezindaweni zokusebenza kuzo zonke izikrini.
Ngaphezu kwalokho, singathola ama-Btrf njengohlelo lwefayela oluzenzakalelayo olwalufakiwe ku-Fedora 33 futhi luzotholakala futhi kule nguqulo entsha yeFedora 34 Beta futhi lokho Ama-Btrf akhela kulo msebenzi ngokuvumela ukucindezelwa okusobala kwesikhala esithe xaxa isitoreji. Lokhu kuklanyelwe ukusiza ukukhulisa kakhulu impilo yabezindaba, njengoba lokhu kuminyanisa kuzobaluleke kakhulu ekwandiseni ukusebenza nokubhala kwamafayela amakhulu, okunethuba lokonga isikhathi esibalulekile ekuhambeni komsebenzi.
Yini le kusho ukuthi ukucindezela okungcono kokushayela okuqinile, okuzofanela kukhulise impilo yeshalofu yokugcina. Njengoba ama-SSDs anempilo elinganiselwe, ukululama kokushaja kuyaziswa. Ukuvuselelwa kwe-Btrfs kufanele futhi kuthuthukise isivinini sokufunda nokubhala se-SSD.
Olunye ushintsho olwethulwayo uhlelo lokusebenza IPulseAudio ithathelwe indawo iPipeWire yokuxuba nokuphatha ukusakazwa komsindo, nge-latency ephansi yabasebenzisi abangochwepheshe njengoba kuhlelwe kangcono ukuhlangabezana nezidingo zeziqukathi nezinhlelo zokusebenza ezithunyelwa ku-Flatpaks, lolu shintsho lusekela ukukhula kwe-IT ezweni eliqukethe izinto.
Ukushintshela ku-PipeWire futhi kudala isikhala sengqalasizinda eyodwa yomsindo engakwazi ukuhlangabezana namacala womuntu siqu nawongoti bokusebenzisa umsindo, ngenhloso yokuqeda ukuhlukaniswa kwendawo yomsindo. Ngokwalabo ababhekele iphrojekthi yeFedora, iphrojekthi yeFedora ihlela ukukhulisa ulwazi lomsebenzisi nokucushwa kwengqalasizinda yomsindo ngokuhlanganiswa okungcono kulo lonke uhlelo.
Futhi, kushiwo lokho I-Fedora 34 Beta inikeza umuzwa ongcono ezimweni zememori ephansi (OOM) ngokunika amandla i-systemd-oomd ngokuzenzakalela. Izenzo ezithathwe yi-systemd-oomd zisebenza ezingeni leqembu, zihambisana kahle nomjikelezo wokuphila wamayunithi we-systemd.
Ngakolunye uhlangothi, esinye isici Isici esithakazelisa kakhulu kusitaki sehluzo seWayland ukusekelwa kwesibonisi okwenza kube lula ukuthi amaseva wefu asebenzise ideskithophu engafinyeleleka ukude, ku-ngaphandle kwalokho, IWayland nayo ithole ukwesekwa kwehluzo ezisheshayo ze-3D kumaNvidia GPUs. futhi futhi kwenziwe ushintsho ekukhethweni kweseshini ezenzakalelayo ku-SDDM ukukhetha iseshini esekwe ku-Wayland esekwe ku-KDE Plasma Desktop ngaphezulu kwe-X11.
Okokugcina, iFedora 34 inamahemuhemu okuthola ukusekelwa okungcono kakhulu kwephedi yokuthinta, noma ngabe ngokuzenzakalela. amaphaneli wokuthinta kufanele afake ukusekelwa kokuswayipha okuvundlile nokumile ngeminwe emithathu.
Ekugcineni, uma unentshisekelo yokwazi kabanzi ngakho Mayelana nazo zonke izinguquko ezihlobene nale nguqulo ye-beta ye-Fedora 34, ungabheka yonke imininingwane ngokuya ku- kusixhumanisi esilandelayo.
Ngokushesha uma kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukulanda nokuhlola inguqulo ye-beta, ungathola isithombe sohlelo kusuka ku- isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Uhlobo lwe-beta lweFedora 34 selukhishiwe futhi lezi yizindaba zalo
I-Czkawka: Isicelo esilula futhi esisheshayo sokususa amafayela ku-Linux
I-RetroShare: ipulatifomu yemiyalezo eyimfihlo